Precision avo lenta sy vidiny mora Machines Machining CNC | PTJ Hardware, Inc.
PTJ dia orinasa mpamokatra lasibatra malaza ao Dongguan.China, manolo-tena ho lasa orinasa efa zato taona eo amin'ny sehatry ny famokarana indostrialy. Amin'ny fampiasana masinina milina famaky dimy, ny rafitra fitantanana ERP mifanaraka amin'ny tena zava-misy amin'ilay zavamaniry, ary nahavita ny fanamarinana ISO9001, ny PTJ dia manana ny fahaizana hamita ny maha-izy azy ny fikirakirana ny sehatry ny fitaovana. Sambany eto amin'izao tontolo izao, ny "fanamarihana 1 minitra, adiny 1 amin'ny milina" ho an'ny faritra tsy manara-penitra, izay nampisondrotra 50% ny fahombiazan'ny famokarana ary 10% ny tombom-barotra. Amin'izao fotoana izao, ny PTJ dia manampy ny mpanavao eran'izao tontolo izao hanova ny vokatra avy amin'ny sary ho zavatra tena izy, manomboka amin'ny prototypes ka hatramin'ny vokatra famokarana betsaka, manampy ny orinasa hitombo manomboka amin'ny fanombohana ka hatramin'ny orinasa goavambe.
Ny orinasa PTJ dia nahalala tamin'ny fanombohana fitaovana fa ny ankamaroan'ny ekipa dia mifototra amin'ny talenta teknolojia sy R&D, ary tsy misy manam-pahaizana momba ny rojom-pamokarana sy ny famokarana. Ny fanombohana fitaovana dia mino fa misy ny tsenan'ny teknolojia sy ny R&D, saingy tsy miraharaha ireo olana sedrain'izy ireo amin'ny fizotran'ny famokarana izy ireo. Voalohany, sarotra ny mamaritra ny drafitra famokarana Faharoa, sarotra ary mandany fotoana ny fitadiavana ilay ozinina sahaza indrindra ny filan'ny faritra ampiasainy. Nandany fotoana be dia be izy ireo niantso ny famotopotorana, nandefa ny sary, niandry valiny, fa tsy nahazo ny vidiny tsara indrindra sy ny fotoana fandefasana nahafa-po indrindra.
Ho fanampin'izany, ny fivarotana PTJ dia mahatakatra fa matetika ny mpanjifa dia manana tsingerim-pandrosoana lava lava noho ny olan'ny famokarana mandritra ny fampivoarana ny vokatra, ary ny kalitao dia tena sarotra ny mifehy. Aorian'ny fahazoana lalina ny teboka fanaintainan'ny mpanjifa, PTJ dia hanohy hanatsara ny vahaolana amin'ireo olana atrehin'ireo fanombohana fitaovana manoloana ny olan'ny milina marina. Manana mpamorona efa za-draharaha, mpamorona endrika, mekanika, injeniera CNC ary injeniera tanana izahay. Injeniera matihanina maherin'ny 200, toy ny injenieran'ny bobongolo, dia afaka manampy ny fanombohana ny fitaovana manomboka amin'ny fampandrosoana ny vokatra, ny famolavolana, ny tanana ka hatramin'ny famokarana betsaka, ary ny famahana ny olan'ny famandrihana ho an'ny fanombohana fitaovana.
Ny fizotran'ny fizotran'ny baiko PTJ dia azo arahi-maso amin'ny fizotry ny mpanjifa amin'ny fandefasana ny fangatahana, ny fitanisan'ny mpivarotra, ny fanodinana lamina, ny famokarana atrikasa, ny fanaraha-maso ary ny fandefasana kalitao sns, izay manatsara ny hafainganan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny mpanjifa.
Ny fotoana antonony hahazoana ampahany dia nohafohezina mihoatra ny 50%, raha ny vidiny kosa 30% ambany noho ny indostria.
Ny fahaizan'ny PTJ miasa irery dia mitarika indostrialy koa, manana fitaovana mihoatra ny 300, mihoatra ny antsasaky ny nohafarana.
Androany, manomboka amin'ny orinasa vao manomboka hatramin'ny Fortune 500 dia afaka mankafy serivisy fanamboarana antonony mora foana izy ireo.